ụlọ ọrụ profaịlụ - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Otu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, lekwasị anya na foto oblique, na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe.
Chọpụta akụkọ banyere ụlọ ọrụ anyị na ndị nọ n’azụ ya.
Ka anyị weghachite oge laghachi na 2011, otu nwoke nke gụsịrị akwụkwọ na Master degree na Mahadum Southwest Jiaotong, nwere nnukwu mmasị n'ụdị drone.
O bipụtara otu isiokwu akpọrọ "Stability of Multi-Axis UAVs", nke dọtara uche onye ọkammụta mahadum a ma ama. Onye prọfesọ ahụ kpebiri itinye ego maka nyocha ya na arụmọrụ na ngwa ndị drone, ọ daghịkwa prọfesọ ahụ.
N'oge ahụ, isiokwu nke "Smart City" adịworị ọkụ na China. Ndị mmadụ wuru ụdị 3D nke ụlọ ndị na-adaberekarị na nnukwu helikopta nwere eserese eserese dị elu (dị ka nke mbụ XT na XF).
Nchikota a nwere ihe ndọghachi azụ abụọ ：
1. Ọnụahịa dị oke ọnụ.
2. Enwere otutu mgbochi ụgbọ elu.
Site na mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ drone, ụlọ ọrụ drones na-ebute ihe mgbawa growthin 2015, ndị mmadụ wee malite inyocha ngwa dị iche iche nke drones, gụnyere teknụzụ "oblique foto".
Foto oblique bu udiri eserese nke ikuku nke ejiri kpachapu anya mee ka igwefoto ahu hu ya site na uzo ozo. Foto ndị ahụ, si otú a were, na-ekpughe nkọwa ekpuchitara n'ụzọ ụfọdụ na foto kwụ ọtọ.
Na 2015, nwoke a zutere nwoke ọzọ nke chịkọtara ọtụtụ afọ na ngalaba nyocha na nkewa, n'ihi ya, ha kpebiri iso ụlọ ọrụ ọkachamara na foto oblique, aha ya bụ RAINPOO.
Ha kpebiri imepụta igwefoto elekere ise nke dị nfe ma pere mpe ka eburu ya na drone ahụ - na mbụ ha jikọrọ aka na SONY A6000 five mana ọ gbanwere na njikọta a enweghị ike rụpụta ezigbo nsonaazụ, ọ ka dị oke arọ, ma enweghị ike iburu ya n’elu ụgbọ-mmiri ahụ ka ọ rụọ ọrụ nkewa zuru oke.
Ha kpebiri ịmalite ụzọ ọhụụ ha site na ala. Mgbe ha kwekọrịtara na SONY, ha jiri Sony's cmos iji mepụta oghere anya ha anya ， na oghere a ga-agbaso ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ nyocha na nkewa.
Riy-D2 ： ụwaOnyekwere igwefoto aka oblique n'ime 1000g (850g) lens oghere anya anya nke emeputara maka nyocha na nkewa..
Nke a ghọrọ nnukwu ihe ịga nke ọma. Naanị na 2015, ha rere karịa 200 nkeji nke D2. A na-ebu ọtụtụ n'ime ha na multi-rotor drones maka obere ọrụ 3D ịme ihe ngosi. Agbanyeghị, maka nnukwu ọrụ 3D ihe nrụrụ dị elu, D2 enweghị ike mezue ya.
N’afọ 2016, a mụrụ DG3. E jiri ya tụnyere D2, DG3 bịara dịkwuo ntakịrị ma pere mpe, yana ogologo ogologo oge, obere oge ikpughere bụ naanị 0.8s, na-ewepu ájá na ikpochapu ọkụ… Ọrụ dị iche iche na-eme ka DG3 nwere ike iburu na nku ahụ maka nnukwu ọrụ 3D ịme ngosi uwe ọrụ.
Ọzọkwa, Rainpoo emeela ka ndị mmadụ na-eme nnyocha na nkewa.
Riy-DG3 ： ibu 650g ， gbadoro anya site na 28/40 mm exposure oge ekpughere obere oge bụ naanị 08.8.
Agbanyeghị, maka ime obodo mepere emepe, ịme ngosi 3D ka bụ ọrụ siri ike. N'adịghị ka ihe ndị ziri ezi dị mkpa n'ọhịa nke nyocha na nkewa, mpaghara ngwa ndị ọzọ dịka obodo ndị nwere ọgụgụ isi, nyiwe GIS, na BIM chọrọ ụdị 3D dị elu.
Iji dozie nsogbu ndị a, ọ dịkarịa ala isi ihe atọ ga-emerịrị ：
1. Ogologo oge dị ogologo.
2. Ihe pikselụ.
3. Obere oge ikpughere oge.
Mgbe ọtụtụ iterations nke mmelite ngwaahịa, na 2019, a mụrụ DG4Pros.
Ọ bụ igwefoto igwefoto zuru ezu maka 3D ịme ngosipụta nke ebe dị elu obodo mepere emepe, yana pikselụ 210MP niile, na ogologo 40 / 60mm, na oge 0.6 na-ekpughe oge.
Riy-DG4Pros, nkpuchi zuru ezu, ihe elekere anya 40/60 mm ， oge ekpughere obere oge bụ naanị 0.6s.
Ọ bụ igwefoto igwefoto zuru ezu maka 3D ịme ngosipụta nke ebe dị elu obodo mepere emepe, ya na ngụkọta pikselụ 210MP 60 na 40 / 60mm gbadoro anya, na oge mgbasa 0.6s.
N'oge a, usoro ngwaahịa Rainpoo zuru oke, mana ụzọ ọhụụ nke ụmụ okorobịa a akwụsịbeghị.
Ha na-achọkarị ịkarị onwe ha, ha mere ya.
Na 2020, a mụrụ otu ụdị kamera na-agbanwe echiche ndị mmadụ - DG3mini.
Weight350g, akụkụ69 * 74 * 64 ， opekempe ikpughe oge-nkeji 0.4s ， nnukwu arụmọrụ na nkwụsi ike ……
Site na otu naanị ụmụ nwoke abụọ, na ụlọ ọrụ mba ụwa na ndị ọrụ 120+ na ndị na-ekesa 50 + na ndị mmekọ n'akụkụ ụwa niile, ọ bụ kpọmkwem n'ihi nhụsianya na "ọhụụ" na ịchụso ngwaahịa ngwaahịa nke na-eme Rainpoo ka na-eto. .
Nke a bụ Rainpoo, akụkọ anyị na-aga n'ihu ……